Lu Hpring - Ma Ngo Bu [Official M/V] - Shift History
Lu Hpring – Ma Ngo Bu [Official M/V]
မင်းကြိုက်တတ်တဲ့ အစားအစာများ ငါမှတ်မိတုန်းပဲ မင်းကြိုက်ခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေလည်း ငါမှတ်မိkkတုန်းပဲ ခုတော့ တို့ နှစ်ယောက်ဝေးပြီပဲ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ အတူလျှောက်ခဲ့ကြတဲ့ လမ်းတွေလည်း ပန်းချီကားလို အတွေးထဲ အတူကြည့်ခဲ့ကြတဲ့ ရုပ်ရှင်များ ငါမှတ်မိတုန်းပဲ ခုတော့ တို့နှစ်ယောက်ဝေးပြီပဲ ဘာအဓိပ္ပါယ်မှမရှိတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါ ငါ မလိုဘူး အကြောင်းပြချက်တွေပေးစရာ မငိုဘူး နင်ပျော်တယ်ဆိုရင် ပြီးတာပဲ မင်းနဲ့ ဆုံတွေ့ခွင့်ရတာ ဘုရားပေးတဲ့ ဆုလာဒ် မင်းနဲ့ ပြန်ခွဲခွာရတာ ငါ့ဘဝဝဋ်ကြွေး မင်းနဲ့ ဆုံတွေ့ခွင့်ရတာ ဘုရားပေးတဲ့ ဆုလာဒ် မင်းနဲ့ ပြန်ခွဲခွာရတာ ငါ့ဘဝဝဋ်ကြွေး ဘယ်လိုလဲ နင်အဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လား အတူလျှောက်ခဲ့ကြတဲ့ လမ်းတွေလည်း ပန်းချီကားလို အတွေးထဲ အတူကြည့်ခဲ့ကြတဲ့ ရုပ်ရှင်များ ငါမှတ်မိတုန်းပဲ ခုတော့ တို့နှစ်ယောက်ဝေးပြီပဲ ဘာအဓိပ္ပါယ်မှမရှိတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါ ငါ မလိုဘူး အကြောင်းပြချက်တွေပေးစရာ မငိုဘူး နင်ပျော်တယ်ဆိုရင် ပြီးတာပဲ မင်းနဲ့ ဆုံတွေ့ခွင့်ရတာ ဘုရားပေးတဲ့ ဆုလာဒ် မင်းနဲ့ ပြန်ခွဲခွာရတာ ငါ့ဘဝဝဋ်ကြွေး မင်းနဲ့ ဆုံတွေ့ခွင့်ရတာ ဘုရားပေးတဲ့ ဆုလာဒ် မင်းနဲ့ ပြန်ခွဲခွာရတာ ငါ့ဘဝဝဋ်ကြွေး မင်းနဲ့ ဆုံတွေ့ခွင့်ရတာ ဘုရားပေးတဲ့ ဆုလာဒ် မင်းနဲ့ ပြန်ခွဲခွာရတာ ငါ့ဘဝဝဋ်ကြွေး ဘယ်လိုလဲ နင်အဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လား ဘယ်လိုလဲ နင်အဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လား ခုတော့ တို့နှစ်ယောက်ဝေးပြီပဲ ဘာအဓိပ္ပါယ်မှမရှိတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါ ငါ
Horoscope for today, August 19, 2019, Monday | Lucky August 2019 For Love, Wealth, and Welfare
Jak prowadzić działalność odpłatną w NGO? [napisy CC]
Space Entertainment says:
SMAN SAE TANG says:
i already hit the like button even from the start….a big fat support….yeah….
wannaswiftly chard says:
🎶🎶🎶🎶🎶Amazing song 2019❤❤❤❤❤❤❤❤
thank you jbj & lu hpring for meaningful song
Nway Nway says:
sanan thangman says:
Emily Anchovy says:
โดม มัง กร says:
Life Man says:
Noel Myanmar says:
Moe Kyaw Oo says:
Amazing song especially lyrics touch the heart.
Muk Gam says:
Ma Hpring Loi naw feel di hkawn u😂😂😂
Thiha Mdy says:
ဆိုးတော့မဆိုးပါဘူး but ကြိုက်လားဆိုတော့ မကြိုက်ပါ
ကိုတေအားပေးတာ RQပါ JBJ လည်းမဟုတ် Galaxy Star လည်းမဟုတ်ပါ
RQ က idol တွေကိုချစ်လို့ တစ်ခါဆီတော့ စဆုံးကြည့်ပေးသွားပါတယ်
Su San Nadi says:
Love heralot! The most emotional and heart touching song <3 already anticipating for her new release T^T
ကျနော် ဒီ video ကိုနှစ်ခေါက်သေချာ
ကြည့်ပါတယ် ။ Ma lu hpring အသံက သိပ်တော့ soft မဖြစ်ဘူး ။ edm type
လေးဆိုကြည့်စေချင်ပါတယ်။ MV ပုံစံလေးကတော့ မဆိုးပါဘူး။ action ပိုင်းမှာ camera နဲ့ eyes content မရှိဘူး ။ အဆွေးသီချင်း ဆိုပေမဲ့ body move လေးတွေ ထည့်လို့ရပါတယ်။ debut မို့ လိုအပ်ချက်တွေရှိသေးတယ် ဆိုတာနား
လည်ပါတယ် ။ video ကိုတော့ like လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ် ခဗျ 👍
Hnin Whutyi says:
support for our M star